के गर्दैछन् भारतलाई २००७ को टी–२० विश्वकप जिताउँने यी खेलाडी? - Nepal Cricket
के गर्दैछन् भारतलाई २००७ को टी–२० विश्वकप जिताउँने यी खेलाडी?
InternationalT20 World Cup
भारतले २००७ मा महेन्द्रसिंह धोनीको कप्तानीमा एकमात्रै टी–२० विश्वकप जितेको थियो । त्यसबेला भारतलाई विश्वकप दिलाउने खेलाडीहरु अहिले क्रिकेटबाट धेरै टाढा गई सकेका छन् ।
जोगिन्दर शर्माको नाम २००७ को टी–२० विश्वकपको फाइनल पछि अमर भएको थियो । भारतलाई अन्तिम ओभरमा पाकिस्तानविरुद्ध १३ रन बचाउँनुथियो । अन्तिम ओभर लिएर आएका जोगिन्दरले दोस्रो बलमा छक्का खाएपनि तेस्रो बलमा मिस्बाह उल हकलाई श्रीसंन्तको हातबाट क्याच दिलाउँदै पाकिस्तानी टोलीलाई अलआउट गराउँनुका साथै भारतलाई विश्वकपको उपाधि दिलाएका थिए । अहिले उनी हरियाणा पुलिसमा डीसपी पदमा कार्यरत छन् ।
२००७ को टी–२० विश्वकपको फाइनलमा ७५ रनको सानदार पारी खेल्ने गौतम गम्भीरले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्नयास लिइसकेका छन् । अहिले उनी पूर्वी दिल्लीबाट भारतीय जनता पार्टीको सासंद छन् । उनी राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।
धोनीले २००७ देखि २०१६ सम्म पाँच विश्वकपमा भारतको कप्तानी गरे । उनको कप्तानीमा यही २००७ को टी–२० विश्वकप भारतले जित्यो । अघिल्लो वर्ष धोनीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्नयास लिए । अहिले उनी भारतीय टोलीसँग मेन्टरका रुपमा आवद्ध छन् ।
युवराज सिंहले उक्त विश्वकपमा इंग्लयाण्डका स्टुअर्ट ब्रडविरुद्ध ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गरेका थिए । यही प्रतियोगितामा उनले सबैभन्दा छिटो अर्धशतक बनाउँने कीर्तिमान पनि कायम गरेका थिए । युवराज सिंहले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्नयास लिइसकेका छन् ।
उक्त विश्वकपको फाइनलमा ४ ओभरमा १६ रनमात्रै दिएर पठानले ३ विकेट लिएका थिए । सोही कारण उनी म्यान अफ द म्याच समेत बने । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्नयास लिइसकेका उनी अचेल कमेन्ट्रीमा व्यस्त छन् ।